Home Horyaalka Ingiriiska Rasmi: Ozil oo u safray Turkiga si uu u soo gabagabeeyo heshiiska...
Mesut Ozil ayaa ku sii jeeda dalka Turkiga si uu u dhamaystiro heshiiska xorta ah ee uu ugu biirayo kooxda Fenerbahce .
32 jirkaan ayaa macsalaameeyay asxaabtiisa Arsenal iyo shaqaalaha xarunta tababarka kooxda ee London Colney Axadii, taasoo soo afjartay 7 sano iyo bar uu ku sugnaa waqooyiga London.
Arsenal ayaa u fasaxday inuu u safro Istanbul halkaas oo uu haatan tijaabada caafimaadka ku mari doono ka hor inta uusan dhameystirin u wareejinta Fenerbahce, oo ah kooxdii uu ku soo barbaaray inuu taageero.
Ozil ayaana mudo sanad ku dhow u ciyaarin kooxda Arsenal iyadoo aysan jirin sabab kubad xumo oo lagu heesto xidigan oo jiray waqti feecan marka la eego kooxda.
Labada Kooxdood ee DC United iyo Fenerbahce ayaa ku tartamayay lakin ugu danbeyn waxa uu doortay kooxda dalka uu asal ahaan kasoo jeedo.
Previous articleFalanqeynta Kulanka Arsenal Vs Newcastle United ee Horyaalka Premier League
Next articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Memphis Depay oo Barcelona kusii jeeda iyo Qodobo kale